Shirkadda Xawilaada Amal Ee Kampala Oo Dhac Xooggan Loo Geystay – somalilandtoday.com
(SLT-Kampala)-Boliska caasimadda dalka Uganda ee Kampala waxay sheegeen inay ku raad-joogaan Budhcad shalay dhac iyo jidh-dil u geystay Ganacsato Soomaali oo ka tirsan Hawl-wadeenadda Shirkadda Sarrifka Lacagaha Qalaad ee Amal Hawala ee ku taalla Xaafadda Kisenyi Parishee magaalada Kampala.
Koox hubeysan oo tiradooda dhan tahay 10 qof oo wejiga soo hagoogtay ayaa la sheegay inay dhacaasi geysteen, sida ay sheegeen Boliska dalkaasi.
Ganacsatada Soomaalida ee la dhacay ayaa kala ahaa: Maareeyihii Shirkadda Sarrifka Lacagaha Qalaad ee Amal Hawala, CabdiFatal Axmed, Ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo Axmed Xasan iyo Lacag-hayihii ama Khasnigii Shirkadda, Issmaaciil Maxamed.
Dableyda waxay weerareen Axmed Xasan oo isagu gacanta ku watay Bac ay lacag ka buuxdo, waxayna xoog kaga qaadeen Bacdii oo la sheegay inay ku jirtay lacag dhan 300 million oo Shillinka Uganda.
Weerarkaasi ayaa waxa uu Xilli Duhurnimo ah maalintii Salaasadii ee la soo dhaafay ka dhacay meel ku dhow dhismaha Bangiga Stanbic Bank ee Faraciisa Nakibuba oo ku yaalla Faras-magaalaha Kampala.
Warbaahinta dalkaasi waxay sheegeen in Kaaliyaha Maareeyaha Shirkadda Sarrifka Lacagaha Qalaad ee Amal Forex ee magaalada Kampala, Axmed Xasan iyo Lacag-hayaha Shirkaddaasi, Ismaaciil Maxamed dhacaasi xooggan loo geystay, xilli ay 380 million oo Shillinka Uganda ka soo qaateen Bangiga Diamond Trust Bank faraciisa Rugta Ganacsiga ee Moolka Ekwatooriyaal.
Hawl-wadeenada la dhacay waxaa la sheegay inay wateen Gaadhi Toyota Wish waxay u sii gudbeen Bangiga Stanbic Bank oo ay Debaaji ahaan u dhigteen 80 million oo Shillinka Uganda, balse, waxaa la dhacay xilli ay u sii lugeynayeen goobta ay gaadhigooda dhigteen.
Dhinaca kale, Ku-xigeenka Afhayeenka Boliska Kampala, Luke Owoyesigyire waxa uu sheegay inay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah Budhcadii dhaca u geysatay Ganacsatada Soomaalida, balse, ay sii daayeen markii lagu waayey fal ku aadan inuu ka mid ahaa Kooxdii dhaca u geysatay Ganacsatada Soomaalida.
Waxa uu intaasi ku daray inay suurto-gal tahay inay Budhcadda ka soo raaceen Ganacsatada xaafadda Kisenyi, lana socdeen ilaa ay Bangiga ka soo qaadayeen Lacagahaasi.
Mid ka mid ah Baadhayaasha Booliska waxa uu sheegay in ayna Dembiilaha ka aqoonsan karin Wejiga ama Sanka oo keliya.
Si kastaba ha ahaatee, Dhacdadan loo geystay Hawlwadeenada Soomaalida ee ka tirsan Shirkadda Sarrifka Lacagaha Qalaad ee Amal Forex waxay ku soo beegantay maalmo kadib, markii uu Madaxweynaha Uganda, Yoweeri Kaguta Museveni kula taliyey Ganacsatada inay kireystaan Shirkadaha Ammaanka marka ay doonayaan inay qaadaan lacag aad u badan, balse, Fariintiisa dheg jalaq looma siinin.
Sannadkii la soo dhaafay ee 2019-ka, dalka Uganda waxaa la diiwaan geliyey 426 Kiisaska dhaca hubeysan ee Lacagaha Kaashka, oo lagu dhacay lacag dhan 3.2 Billion oo Shillinka Uganda ah.